Andro iraisana - famantarana sy fombafomba amin'ny andron'ny fidinan'ny Fanahy Masina
Fanahin'ny andro - famantarana sy fombafomba, inona ary inona no tsy vita?
Misy ny fialam-boly maro, izay manana ny tantarany, fomban-drazana ary finoanoam-poana. Taorian'ny Trinite, dia mahazatra ny mankalaza ny fanahy miaraka amin'ny andro iray, ny mari-pamantarana sy ny fombafombam-piaviana izay natsangana tany am-piandohana. Mino ny olona fa ny herin'io andro io dia manana hery lehibe ary azo ampiasaina ho an'ny tsara.
Inona ny Andron'ny Fanahy?
Fialan-tsasatry ny fiangonana izany ary heverina ho fiandohan'ny fiangonana izany. Mino ny olona fa tamin'io andro io dia nanonona ny Toriteniny teny an-tendrombohitra i Jesoa, ary nilatsaka tamin'ny apôstôly ny Fanahy Masina . Ny fikarakarana ny andro iray ao amin'ny ortodoksia, dia tsara ny manamarika fa mankalaza azy isan-taona amin'ny andro manaraka ny Trinite. Ao amin'ny vahoaka ity fialantsasatra ity dia heverina ho toy ny anaran'ny andro eto an-tany. Maro ny famantarana sy fomban-drazana mifandraika amin'izany.
Aloka iray andro - inona no azonao atao?
Ny fialan-tsasatra dia tokony hanomboka amin'ny fanentanana ho an'ny fiangonana ho amin'ny fanompoana, izay natokana amin'ny Fanahy Masina sy manome fiainana. Ao amin'ny fiangonana dia afaka mivavaka ho an'ny havanao efa nodimandry sy namana ianao. Rehefa afaka ny tempoly dia afaka mankany amin'ny toeram-pandevenana ianao mba handravahana ny sampana miorina amin'ny sampan'ny fasana. Ny hariva dia nisy sakafo fety natao. Misy lisitry ny fomban-drazana manokana mifandraika amin'ity fialantsasatra ity:
Tamin'ny andron'i Dukhov, ny famantarana sy ny fombafomba dia manondro fa amin'ny fialantsasatra dia ilaina ny mitahiry zavamaniry sy voninkazo. Izany dia noho ny fisian'ny zavamaniry voaangona sy maina dia hanana fanasitranana. Ireo mpihinana herbal avy amin'ireo zavamaniry dia nanomana vovo-dronona handroahana demony.
Nino ny olona fa andro fialan-tsasatry ny Andro Fanavotan'ny Vehivavy ary ny fampisehoana ny fanajana ny tany, ny vehivavy manambady dia nivory teny ambanivohitra ary nanao fankalazana.
Ny fomban-drazana iombonana dia ny fanesorana ny fahotantsika, fa ny fanaovana izany fotsiny amin'ny rano misokatra dia voarara. Nampiasaina hanasana rano tsara. Ny olona iray dia tokony hametraka vola madinika ao anaty lavadrano, mamaky vavaka ary manasa.
Zava-dehibe ny mahafantatra raha tonga ny andron'ny Fanahy Masina, izay tsy azo atao, ka tsy mety ho fongotra ity fialantsasatra ity, mba tsy hameno ny fahasambaran'ny fianakavianao amin'ny fahasambarana. Tsy afaka miasa ao an-trano ianao ary ao amin'ny zaridaina, ary mbola manambady.
Ao amin'ny trano fiangonana dia ilaina ny mitondra ny sampana voatokana amin'ny alika, izay nampiasaina ho fiarovana mahery amin'ny hery ratsy.
Azo atao ve ny manadio ny andro Spirits?
Raha mitodika any amin'ny soratra masina ortodoksa ianao, dia tsy misy fandraràna mifandraika amin'izany andro izany. Mino ny mpino fa andro fankalazana masina sy Trinite dia masina fialan-tsasatra ary tsy mandray anjara amin'ny raharaha anatiny. Ny fotoana rehetra maimaim-poana dia nomena ny vavaka sy ny fialamboly ho an'ny fiangonana. Raha ilaina ny fanadiovana maika, dia tsy misy fahotana lehibe amin'izany.
Azo atao ve ny manasa amin'ny andron'ny Fanahy?
Ny fialan-tsasatry ny fiangonana ho an'ny mpino dia andro mena amin'ny kalandrie, mandritra izany fotoana izany dia ilaina ny manokana ny tena, mandeha any am-piangonana, mianatra ny Tenin'Andriamanitra ary mivavaka. Satria tsy raharaha maika ny fanasana, dia asaina manoloana izany amin'ny fotoana hafa. Ao amin'ny lisitry ny zavatra atao amin'ny Alatsinainy, tsy misy fanamarihana momba ny fanasana, satria koa, araka ny finoan'ny vahoaka avy amin'ny renirano, ny toerana nodiovina dia mandehandeha any anaty ala, saka ary fanahy ratsy hafa. Ankoatra izany, heverina fa mety hanasa ny fahasambarana rehetra ny fanasana.
Tsara ve ny manasa ny tenanao amin'ny andron'ny Fanahy?
Manaiky ny mpitondra fivavahana fa raha tsy misy filàna mazava, dia tokony hajanona ny fikarakarana rano. Araka ny finoanoam-bahoaka, ny herinandro izay manomboka amin'ny "Spirit of the Day" dia antsoina hoe "siramamy", noho izany ireo andro mafana dia mavitrika ary afaka mitarika olona eo ambanin'ny rano, noho izany dia tsy afaka milomano ao anaty rano ianao. Mba hahazoana antoka fa ny andron'ny fiantsoana ny Fanahy Masina dia nandalo tsy nisy zava-nitranga, ny olona dia namatotra ireo lambam-paty tamin'ny hazo izay akaikin'ny toerana fandroana. Izy ireo dia toy ny karazana fanavotana natao ho an'ny zipo.
Azo atao ve ny mametraka andro ao amin'ny fanahy?
Ny mpino mino dia midika fa ny Fanahy Masina dia midina amin'ny tany amin'ny maraina ary mijanona eo mandritra ny andro. Hatramin'ny fahiny, dia heverina fa tokony handehandeha eny amin'ny tany tsy misy varotra mandritra ny fialantsasatra izy, saingy voarara tanteraka ny miasa any amin'ny zaridaina sy ny fijinjana. Ny sampy dia miankohoka amin'ny fanahy toy ny andro amin'ny tany, noho izany dia zava-dehibe ny hankamamy izany ary hampiseho ny fanajanao sy ny fanajanao.
Azo atao ve ny manjaitra ny andro iray ao amin'ny Fanahy?
Mino fa tsy natao ho an'ny asa ny androany, ary tokony hivavaka amin'ny Tompo ny fotoana malalaka. Ireo olona liana amin'ny hoe mety handavaka andro iray ao amin'ny Fanahy izany ary hanao karazana fanjaitra iray hafa, noho izany dia ilaina ny mahafantatra fa tsy ilaina ny asa amin'izao andro izao, fa raha ilaina ny manja bokotra iray, dia azo atao izany. Amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny tsy mandeha any ivelany, noho izany rehefa avy nanatrika ny fanompoam-pivavahana maraina, amin'ny tolakandro dia afaka manao ny zavatra ataonao ianao.
Fanahin'io andro io ny famantarana
Hatramin'ny vanim-potoana fahiny ka hatramin'izao androntsika izao, maro ireo finoanoam-poana no nidina ary ny tena mahaliana dia maro amin'izy ireo no mbola manana ny heriny. Fantatra amin'ny andron'ny fanahy, famantarana ny toetrandro ary tsy hoe:
Inoana fa avy amin'ity fialantsasatra ity no azonao itokisana ny hafanana ary tsy hisy intsony ny hatsiaka.
Amin'ny andro ara-panahy, ireo famantarana sy fombafomba dia mifototra amin'ny fahendrena amin'ny olom-pirenena, voarara ny mijery ny fisaintsainanao ao anaty rano, satria mety hahatonga ny olona iray ho very ny tena fitiavana.
Mba hiarovana ny tenanao amin'ny fanahy ratsy dia ilaina mandritra ny fialan-tsasatra ny mitaona zavamaniry misy fofona mahery, ohatra, mba hahazoana na tongolo lay.
Tsy afaka mihazakazaka ianao mandritra ny andro, satria mety ho afa-mandositra ny anjaranao ianao, fa raha mandeha tsy misy bararata amin'ny ando ianao, dia afaka mitondra ny fahasambaranao.
Milaza ny famantarana nataon'ny olona amin'ny Fanahy ao anatin'io andro io fa afaka mianatra momba ny hoavin'izy ireo ny ankizivavy amin'ity andro fialantsasatra ity. Ilaina ny manangom-bokatra mavomavo ary mametraka izany eo amin'ny rano. Raha mitelina izy dia tokony hiandrandra fahasahiranana, ary raha mbola velona ianao dia miandry ny fanolorana ny tanana sy ny fo . Ny felam-boninkazo nipoitra dia naminany lava sy sambatra.
Rainin'ny andro ara-panahy - famantarana
Hatramin'ny andro fahagola, nandinika ny fiovan'ny toetr'andro ny olona, ​​izay nitsara azy ireo momba ny fisehoan-javatra amin'ny hoavy. Raha ny andro ito, dia midika izany fa amin'ny fahavaratra sy ny fararano dia ho azo atao ny manangona karazana holatra feno. Ny tsy fahombiazan'ny fialan-tsasatry ny fiangonana dia fanomezana tsara, nefa nino fa hanohy herinandro enina ity toetrandro ity. Ny orana tamin'ny andron'i Dukhov dia nampanantena ny andro mafana tamin'ny fahavaratra sy ny fararano. Raha nisy oram-baratra nitranga ary hita maso ny tselatra, dia marika tsara izy io, ka manondro fa ny tany dia mandroaka fanahy ratsy.
Sarintsarim-bola amin'ny andron'ny Fanahy
Mba hanatsarana ny toe-bolanao, tsy maintsy mampiseho ny fahalalahan-tananao amin'ity fialantsasatra ity ianao. Rehefa mandao ny fiangonana aorian'ny fanompoana ianao dia tokony hanome izany ho an'ireo sahirana. Ny famantarana eo amin'ny tsinin'ny andro dia manondro fa amin'ity vanim-potoana ity dia manokatra ny tsiambaratelo rehetra ho an'ny olona ny tany ary hahita harena sarobidy. Tamin'ny andro fahiny, ny Slaviana, rehefa avy nitsidika ny tempoly sy nivavaka tamin'ny Fanahy Masina, dia nandeha "hihaino ireo harena", izay nianjera tamin'ny tany.
Plots amin'ny Fanahy Masina
Maro ireo olona no nampiasa fialan-tsasatry ny fiangonana hatramin'ny fotoana taloha mba hamakiana ny fikomiana mikendry ny hanova fiainana ho an'ny tsara kokoa. Anisan'ny fomba amam-panao malaza sy mahazatra indrindra, afaka manavaka ireto fombafomba manaraka ireto isika ao amin'ny fanahin'ny andro:
Mba hanangonam-bokatra amin'ny fotoam-pialan-tsasatra tamin'io fialantsasatra io, ny olona tamin'ny maraina nohosihosena voatsangatsangy, nanameloka nandritra ity fikomiana ity laharana voalohany. Amin'ny andro eny an-tanimbolinao na eo amin'ny tanimbolinao eo amin'ny sisiny dia mila mihady lavaka kely ianao, mametraka ny atody ety, mamafaza amin'ny tany, lazao ny tarehimarika 2.
Amin'ny Andro Ara-panahy, maro ny famantarana sy fombafomba mifandraika amin'ny tany ary ny olona dia mino fa afaka mizara ny hery hivoahany izy. Noho izany antony izany, dia nisy fombafomba manokana natao, izay manampy amin'ny fiatrehana ny aretina nipoitra. Tena tsotra izany: 5-7 minitra. Ilaina ny mandeha tsy misy kodiarana amin'ny tany, mamerina ilay tetika.
Manohy mikaroka amin'ny fombafomba tsotra izay manampy amin'ny fampandrosoana ny tohatra ho amin'ny toeram-piasana ny fanadihadiana ny hevitry ny Fanahy amin'ny andro, ary inona no mety hipoitra. Voalohany, amin'ny andro feno volana, dia tokony haka sombina siramamy telo avy amin'ny zana-kisoa ny tanora ary hanamaivana azy tsara ary hamahana azy io, ka hampihena azy. Amin'ny Alatsinainy Alarobia, manorata ny anaranao na ny anaran'ilay olona izay mila fitomboana . Ambony sy ambany dia manamboatra lakroa ary manonona teboka iray. Tamin'io andro io ihany, ny ampahany tamin'ny hoditra sedera teo ambonin'ny rano, ny zarete faharoa tao amin'ilay tany, ary ny fahatelo nifamatotra tamin'ny hazo iray tany an'ala.
Vavaka eo amin'ny Andro Fanavotana
Amin'ny andro fialantsasatra masina, dia mahazatra ny mitodika amin'ny Fanahy Masina mba hanehoana ny fifaliantsika sy hangatahana fanampiana. Ny lahatsoratra voatondro dia manerana izao tontolo ary matetika antsoina matetika hoe antso an-tariby. Ny vavaka ho an'ny andron'ny Fanahy Masina dia fangatahana amin'Andriamanitra mba hitoetra ao anatintsika ary hanadio amin'ny tsy fitovian-kevitra rehetra, izay mety hahatonga antsika hisakana antsika tsy hifanerasera aminy any amin'ny tontolo manaraka . Ny fikarakarana fombam-bolana fohy dia manome tombony fito: saina, fahendrena, faharetana, fieritreretana, fihavanana ary tahotra an'ny Tompo.
Inona avy ireo fanalahidy?
Nahoana ianao no manonofy voninkazo amin'ny bouquets?
Famantarana ny 15 Oktobra
Ny voalohany tamin'ny Aogositra - famantarana sy finoanoam-poana
Famantarana ny Krismasy ho an'ny fitiavana
Manao ahoana ny endriky ny fandevenana?
Ny famantarana ny olona
Inona no dikan'ny molia eo amin'ny tendany?
Nahoana ny nofy no mandihy amin'ny nofy?
Inona no hitan'ny olon-tsy fantatra?
Inona no nofinofin'ny abrikô?
Nahoana no manonofy ilay alika ratsy?
Inona no endrik'ireo panties?
Nahoana ny dracaena no mivadika ravina mavo?
Ny mpiray tanàna Kim Kardashian dia tsy naheno ny feon'ireo halatra
Ny fototry ny parsley - fananana medikaly
Boots ugg ny ririnina
Rose McGowan nanafika an'i Meryl Streep, izay nanapa-kevitra ny hanohitra ny fanorisorenana
Oviana miteraka fifindrana amin'ny IVF - fitsaboana
Joint swimwear 2013
Shoes - Fashion spring-summer 2016
27 tena ... tsara tarehy, sary hafahafa
Balyk avy amin'ny trondro
Ahoana no handoko ny felam-paty any an-trano?
Ahoana raha ratsy daholo ny zava-drehetra?
Miangona ao an-trano
Fomba "Spiders" miaraka amin'ny fanjaitra
Herinandro fialan-tsasatra - aiza no hiaraka amin'ilay zaza?